"(Nilaza Jesosy hoe:) Dinihinareo ny Soratra Masina, … ireny no manambara Ahy." Jaona 5:39
"Ary hoy Jehovah Andriamanitra tamin’ny menarana : … izy (ny taranaky ny vehivavy) hanorotoro ny lohanao, ary ianao kosa hanorotoro ny ombelahin-tongony. " Genesisy 3:14, 15
Ny andinin-tSoratra Masina faharoa etsy ambony dia anisan’ny faminaniana tranainy indrindra ao anaty Baiboly.
Notononin’Andriamanitra izy io raha vao avy namitaka ny lehilahy sy ny vehivavy i Satana, izay naka ny endriky ny menarana, mba hitaomany azy ireo tsy hankatò. Nanomboka hatreo dia nanamarika ny zanak’olombelona ny faharatsiana. Kanefa amin’io faminaniana io, dia mampitsimoka fanantenana Andriamanitra. Nambarany ela dia ela mialoha, hatramin’ny nidiran’ny ota teto amin’izao tontolo izao, ny fanafana hoentin’Izy tenany momba io toe-javatra mahonena io.
“Ny taranaky ny vehivavy” dia manondro an’i Jesosy Kristy tonga olona satria natera-behivavy, naterak’i Maria. Nanaiky ny ho faty teo amin’ny hazofijaliana Izy, ary io no namarana ny fiainany teto an-tany ; izany no atsidiky ny hoe “ombelahin-tongotra voatorotoro”: toy ny hoe naato ny diany teto an-tany. Raha jerena ivelany, ny fahafatesan’i Jesosy dia fandresen’i Satana, saingy raha ny marina, dia nanamarika ny fahareseny izany. Kristy dia nandringana “tamin’ny fahafatesana ilay manana ny herin’ny fahafatesana, dia ny devoly” (Hebreo 2. 14). Fandresena re izany ! Nanorotoro ny lohan’ny menarana Izy, izany hoe naharesy azy tanteraka. Maty Jesosy, kanefa nitsangana tamin’ny maty. Izy no olona voalohany any an-danitra, izay nitsangana tamin’ny maty. Izy no lalana hamonjena ho afaka amin’ny fahafatesana izay rehetra mino Azy.
Io faminaniana io, natao efa arivo taona maro, dia tanteraka 2000 taona lasa izay. Mbola manjaka eto amin’izao tontolo izao i Satana ary manandevo ny olombelona. Fa ho avy ny andro hanipazana azy any amin’ny helo, noho ny fandresen’i Kristy azy teo amin’ny hazofijaliana (Apokalypsy 20. 10).